Automating HR ဆိုတာ Luxury အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် ရှိကိုရှိထားသင့်တာလား? - JustLogin
ဧပြီ 5, 2020
နည်းပညာတွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအတွက် မဟုတ်တောင်မှ တော်တော်များများ အတွက် အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီး တိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ။ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တော်တော်များများ မှာ ဆက်တိုက်လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အခြားသာမန်ကိစ္စရပ်လေးတွေကို လူတွေမျက်စိ ဒေါက်ထောက် ကြည့်နေစရာမလိုဘဲ နည်းပညာတွေနဲ့ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သမားရိုးကျလုပ်တဲ့ ပုံစံတွေထက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာတွေတိုးတက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ Automating HR စနစ်က ကဏ္ဍတော်တော် များများအတွက်တော့ အားနည်းနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။။
Operation HR ပိုင်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးတာက ပိုနည်းလမ်းကျတဲ့ HR လုပ်ငန်းတွေကို တားဆီးနေပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကကျတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်တွေအတွက် တူညီတဲ့နှုန်းထားနဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေကို HR တွေလိုအပ်ပါတယ်။
HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ မညွှန်ကြားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အလုပ်သမားအင်အား မျှော်မှန်းထားတာတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အတွက် အထူးသဖြင့်တော့ ဒီအချက်ကမှန်နေပြန်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ရဲ့ သစ္စာရှိမှုဆိုတာကတော့ သူရရှိတဲ့လစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်ပြီး လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမရှိကိုလည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုအနေနဲ့ အဓိကထားစဉ်းစား ကြပါတယ်။
CareerBuilder ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့ HR Manager တွေအနေနဲ့ အလုပ်ချိန်ရဲ့ ၂၈% နာရီ ၂၀ နဲ့အထက်နဲ့ ၁၁% နာရီပေါင်း ၃၀ နဲ့အထက်ကို အချိန်တွေအလဟသကုန်ဆုံးနေပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ပတ်အလုပ်ချိန်ရဲ့ ၁၄ နာရီလောက်ကို ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကို အကျိုးရှိမယ့်လုပ်ငန်းတွေအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အချိန်ကုန်ုသက်သာစေဖို့အတွက် အမြဲလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို နည်းပညာအသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်တာကက ပိုတိကျသေချာစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ အမှားဖြစ်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုလည်း လျှော့ချ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကြောင့် လုပ်ငန်းရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတန်ဖိုးကို အမှားများတတ် လွန်းတဲ့ လူသားတွေထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရခက်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဆိုတာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အလိုအလျောက် လုပ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းသာ ရှိမယ်ဆိုရင် တန်းဖိုးတစ်ခုမသတ်မှတ်ပေးတဲ့ HR Admin ဆီမှာ ဘာကြောင့် ရေစုန်မြုပ်ခံမှာလဲ?
Access Group ရဲ့သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကုမ္ပဏီအလယ်အလတ်စားတွေရဲ့ ၆၅% သော HR ကျွမ်းကျင်သူတွေက လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အချိန်မရွေးရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ လုပ်ခလစာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးတွေကို လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့အချိန်တွေက တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ကုန်ဆုံးလာပါတယ်။
ဒီလိုအလုပ်တွေက HR နဲ့ သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဌာနတွေက နည်းနည်းပဲလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုရိုးရှင်း လွယ်ကူစေတဲ့ HR နည်းပညာအရင်းအမြစ်တွေနဲ့သာဆိုရင် သာမန်လုပ်ငန်းတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ HR ကို တာဝန်တွေအားလုံး ပေးထားတာကြောင့် HR အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရပိုတွင်ကျယ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်သတင်း ပြည့်ဝနေတဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက် ဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို သေချာစီမံနိုင်ဖို့ အတွက် HR ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Automating HR ဆိုတာဘာလဲ?
အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ HR လုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေဟာ ပုံမှန်အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်တတ်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ တစ်ကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိကို ကြာနိုင်ပါတယ်။ Automating HR ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းပညာစနစ်တွေ၊ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စနစ်တွေ၊ အချက်အလက် စုဆောင်းတာတွေကို Onboarding ပုံစံနဲ့တစ်ခါထဲ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ review ပေးတာက အစကနေအဆုံးအထိ မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အကျိုးရှိလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေက HR တွေအတွက်ပဲ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ကျစရိတ်အစီရင်ခံခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆောင်းဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုလို အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း အီလက်ထရောနစ်ပုံစံတွေနဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HR Management ကတော့ အဆက်မပြတ်ပေါ်ပေါက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဝန်ထမ်းတွေစီမံခန့်ခွဲမှုကနေ လူသားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုပြီး ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ လူအင်အားနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကြောင့် နည်းပညာတိုးတက်လာပြီးတော့ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်ထုတ် ပစ္စည်းကရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို အသုံးစရိတ်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအသစ်တွေက HR Automation Service တွေကို လုပ်ငန်းမျိုးစုံမှာ အသုံးပြုနိင်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးပြုမှု တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
JustLogin ဆိုတာကတော့ Cloud Payroll, Leave and Time & Attendance Application တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ HR Software ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ HR လုပ်ငန်းတွေကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ စီးပွားရေးတွေကို ဆက်ပြီးအာရုံစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HR ကိုပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို သိရဖို့ အခုပဲ Sign Up လုပ်ပြီး Free Trial ကိုရယူလိုက်ပါ။
Uncategorized @my အောက်တိုဘာ 6, 2020
စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ ကာလမှာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
လစာစာရင်းကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၅) သွယ်